Fadzwa norwendo rwako nevanodiwa, Ingoidza - + 91-993.702-7574 uye bhuku rinonzi Odisha Chhattisgarh Tribal Tour
Upenyu hwemarudzi chinhu, icho chinogara chichifadza munhu wemazuva ano. Dombo reMatombo 'Odisha Chhattisgarh Tribal Tour ichakutendera kuti uongorore madzinza akasiyana eAdisha neKhhattisgarh ane mapeji ayo chaiwo. Mamwe madzinza ekutanga eAdisha neKhhattisgarh ndeye Dunguria Kondh Tribes, aine mavara aBonda Tribes neGadaba, Maria naMaria Tribes, Gond Tribes avo vachiri kugara mumakomo akakwirira uye vakachengetedza tsika yavo netsika zvakasimba kusvikira nhasi. Odisha Chhattisgarh Tribal Tour ichakubvumira kuti iwe uwane chinangwa chemadzinza akasiyana. Izvozvi nzvimbo dzakaisvonaka munzvimbo muno dzinoramba dzisina unxplored dzinopa ruzivo runofadza. Marudzi eOdisha neKhhattisgarh ane nzvimbo yakasiyana-siyana munharaunda yeEthnographic mapaIndia yekuve nemarudzi akasiyana-siyana emadzinza emarudzi. Nehari yedu yakananga ye Odisha Chhattisgarh Tribal Tour inogona kuwana tsika, tsika, tsika dzemarudzi uye zvigadzirwa zvemhizha. Odisha Chhattisgarh Tribal Tour inokukoka iwe kuti unzwe hupenyu hunoshamisa hwemarudzi eIndia.
06 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 212
ZUVA 01: ARRIVAL VISAKHAPATNAM - JEYPORE
Paakazosvika kuVisakhapatnam ndege kuenda kuJypore pavanoshanyira vashomanana misha dzemadzinza, Jagannath temberi muKoraput Town uye panguva dzekushanya kweguta reJeepore. Usiku huno paJepore.
ZUVA 02: JEYPORE - ONUKUDELLI - JAGDALPUR
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaOnukudelli kunoshanyira rudzi rwekare rukuru rinonzi Bonda, Gadaba & Didayee mumusika wevhiki nevhiki. Zvadaro enda kushanyira misha midzinza yeGadaba ugoenda kuJagdalpur. Usiku huno paJagdalpur.
ZUVA 03: JAGDALPUR - KANGER VALLEY NATIONAL PARK & TIRATHGARH WATERFALL - CHITRAKOOT WATERFALL - JAGDALPUR
Mushure mekushanya kwekudya kwekudya kwaKanger Valley National Park uye Tirathgarh Waterfall. Zvadaro masikati kushanyira Chitrakoot waterfall (iyo inonzi Niagara Waterfall). Usiku huno paJagdalpur.
ZUVA 04: JAGDALPUR - KONDAGAON - KANKER
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemaawa anoenda kuKanker kushanyira Kondagaon (inozivikanwa nokuda kwekukanda dhokra) uye Kideichapra (inozivikanwa nemusha wematare). Usiku huno paKanker.
ZUVA 05: KANKER
Mushure mekudya kwemazuva emangwanani, farai musasa wezuva rose kuti mushanyire musha wemumusha weBhahaigaon, unozivikanwa nevatambi vayo. Nharaunda dzakakomberedza Kanker ndeyekusingaperi kwezvinhu zvinonakidza zvakawanikwa. Kushanyira Gond Muria uye Gond Halva misha dzemhuri zvinogona kuva chiitiko chinonakidza kwauri. Manheru, tinodzokera kuKanker. Usiku huno huchagara paKanker Palace.
ZUVA 06: KANKER - RAIPUR
Mushure mekudya kwekudya kwemafambisi kuenda kuRaipur kushanyira misha miduku munzira. Zvadaro, pedzai imwe nguva muKamparan uye muRajim Lochan. Zvadaro tarisa muhotera uye usiku humwe kuRaipur.
ZUVA 07: RAIPUR AIRPORT DROP
Mushure mekudya kwekudya kwemafambisi kuenda kuRaipur mhepo yepamusoro kuenda kune imwe nzira.